Oonobumba baka-LEACREE ngamagama axandileyo athi iNkokeli neNdalo.Ibonisa isimo sengqondo seBrand "sokukhokela kunye nokwenza izinto ezintsha".
I-LEACREE ibambelele kwiimbono zophuhliso lweshishini "Ubunjani bokuQala, ukuVeliswa kweTekhnoloji, ukwaneliseka koMthengi" ukuzibandakanya kuphando kunye nophuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa ukothuka kwezithuthi ezikumgangatho ophezulu kunye ne-struts kunye nezinye iimveliso zokunqunyanyiswa.
Njengomvelisi we-ISO9001/IATF 16949 oqinisekisiweyo wokunqunyanyiswa kweemoto, i-LEACREE ihlala isongeza kwaye isenza banzi umgca wemveliso yethu kunye nokugubungela.Ngeli xesha, sinikele ngamandla ethu ekuphuhliseni nasekuveliseni ubuchwephesha obuphezulu kunye nomgangatho ophezulu wokothuso wokunqunyanyiswa kunye ne-struts ukuphucula amava okukhwela abanini bezithuthi behlabathi.
Inkcubeko ethi "iNkokeli, iNdalo, ukunyaniseka kunye nokuphumelela" ngumphefumlo we-brand LEACREE, eyona nto ibalulekileyo kuphuhliso oluzinzileyo lweshishini.
Isimo sengqondo “sokukhokela” senza ukuba uLEACREE asoloko ekwinqanaba eliphambili lokothuswa kwe-aftermarket & struts ngokusebenzisa itekhnoloji ekhokelayo kunye nezixhobo eziphambili.
I-LEACREE iqhubeka nokusukela iteknoloji, inkonzo, ulawulo, ukuthengisa kunye nokugcina ukuphucula umgangatho wemveliso.Ukuze kuphuhliswe phambili ngakumbi, ntofontofo, ehambelana nokusingqongileyo kunye neemveliso zokukhwela ezikhuselekileyo, i-LEACREE iseke amaziko ezicelo zetekhnoloji e-R&D anamaziko ophando lwenzululwazi adumileyo kunye neeyunivesithi eTshayina nakumazwe aphesheya.
Ngexabiso elicacileyo, umgangatho ophezulu, ukuqinisekiswa komgangatho, ukungabi naxhala emva kokuthengisa, i-LEACREE ikhonza abathengi bethu ngentliziyo epheleleyo.
I-LEACREE isoloko izibophelele ekuphumezeni isiphumo sokuphumelela kunye nabasebenzisi bokugqibela, abathengi kunye nababoneleli.
Gqibezela iNdibano yeStrut Gqibezela iiStruts China Shock Absorbers Ukothuka okunokulungiswa IShock Absorber yeMoto Air Suspension Strut